Netizen Report: Ady Antserasera Ao Anatin’ny Fifidianana Ao Armenia sy Ekoadaro · Global Voices teny Malagasy
Netizen Report: Ady Antserasera Ao Anatin'ny Fifidianana Ao Armenia sy Ekoadaro
Voadika ny 09 Avrily 2017 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, বাংলা, русский, Français, English
Zava-kanto vita amin'ny Stencil ao Wisconsin, Etazonia. Sary avy amin'i David Drexel tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Manome topi-maso ireo fanamby, fandresena sy vaovao malaza mikasika ny zo amin'ny aterineto manerantany ny Netizen Report ato amin'ny Global Voices Advocacy
Nanjary fotoana iray mampirongatra ny sivana, ny fanorisorenana, ny fampielezana vaovao diso iniana atao an-tseraserra ny fotoam-pifidianana. Tamin'ny herintaona, nakatona ny tambajotra fampahalalam-baovao sosialy tao Oganda [mg] sy Montenegro [mg] nandritra ny fifidianana tao amin'ny firenena. Tao Gambia sy Gabon, nakatona daholo ny aterineto.
Mampiavaka ny fifidianana parlemantera ao Makedonia, ny fifidianana filoham-pirenena ao Etazonia, ary vao tamin'ny herinandro lasa ny fifidianana filohan'ny mpanatanteraka ao Hong Kong ny herisetra atao amin'ireo kandidà sy mpikatroka ara-politika. Satria efa akaiky ny fifidianana ao Iran, manery ny fitondrana Rouhani mba hanakana ny fampiharana fandefasan-kafatra Telegram [mg] ireo hiringiriny. Ary mitombo ny herisetra ao Rosia [mg] sy Frantsa, satria miomana hifidy ny filohan'izy ireo manaraka ny firenena roa tonta.
Hita fa tsy miavaka ihany koa ny fifidianana tao Armenia sy ny Ekoadaoro tamin'ny herinandro. Nahitàna fikasana miharihary hanohitra ireo hetsika antseraseran'ny mpanao gazety ary fara fahakeliny nahitana trangam-baovao faikany iray ny fanomanana ny fifidianana ankapobeny any Armenia. Nitatitra ny fikambanana fiarahamonim-pirenena malaza iray fa nikasa hiditra tamin'ny kaontiny mailaka ireo mpijirika tohanan'ny governemanta, ary mpanao gazety Armeniana maro no nilaza fa naato ny kaontin'izy ireo tao amin'ny Twitter talohakelin'ny fifidianana. Naverina tamin'ny toerany avy ny kaontin'izy ireo taorian'izany.
Nilaza ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny Fikambanana ho an'ny Fiarovana sy Fiarahamiasa ao Eoropa (OSCE) fa ny fifidianana, izay niafara tamin'ny fandresen'ny fitondran'ny Antoko Repoblikana ao Armenia amin'izao fotoana izao dia tsara tantana amin'ny ankapobeny, saingy mbola voaloton'ny fiampangana azo inoana amin'ny fividianana vato sy fanerena ireo mpiasam-panjakana sy ny mpiasan'ny orinasa tsy miankina.
Tao Ekoadaoro kosa mandritra izany, niatrika fanakanana kaonty media sosialy maromaro [mg] ireo kandidàn'ny antoko mpanohitra sy ny mpanohana azy ireo, tahaka izany koa ireo fikambanana tsy miankina mpiaro ny zon'ny media. Nanamarika ireo tranonkala mpomba ny mpanohitra sy ny fikambanana tsy miankina vitsivitsy mpamoaka vaovao fampianarana momba ny fifidianana fa nahitana fihenana ny mpijery habaka tao amin'ny mpanome tolotra aterineto ao an-toerana ny harivan'ny ny fifidianana, nitarika ahiahy amin'ny fitsabahana izany. Niharan'ny fanafihana DDoS ihany koa ny tranonkala fidirana amin'ny aterineton'ny vondrona Usuarios Digitales andro vitsivitsy talohan'ny fifidianana, toy izany koa ny tranonkalan'ny kandidàn'ny mpanohitra Guillermo Lasso.
Nanao fanarahana tamin'i Rosia ny LiveJournal, mandràra ny “fangatahana ara-politika”
Rehefa avy namindra ny lohamilin'ny tahiry avy ao California nankao Rosia ny sehatra fitorahana bilaogy LiveJournal – izay efa novidian'ny orinasa Rosiana SUP Media tamin'ny taona 2007. Midika izany fa ho azon'ny polisy Rosiana hidirana tanteraka ny tranonkala, araka ny lalàna “miady amin'ny fampihorohoroana” ao Rosia nankatoavina vao haingana. Ankoatra ireo fepetra hafa, mandràra ny “fangatahana ara-politika” ny fifanarahana nohavaozina momba ny mpisera LiveJournal, saingy tsy mamaritra ny dikan'ny teny voalaza.
Hiverina any an-tsekoly ao Shina ve ny Google?
Ny Google Scholar no mety ho tolotra Google voalohany hiverina any Shina, araka ny filazan‘i Liu Binjie mpanao lalàna ambony Shinoa. “mifandray amin'ny Google amin'ny alalan'ny fantsona isan-karazany i Shina,” hoy i Binjie, maneho fanantenana fa mety hiverina ao Shina ny ampahan'ny fandraharahan'ny Google (izay faritan'i Binjie fa “tolotra tsy miditra amin'ny vaovao saro-pady [ara-politika] ), ary ho arahin'ny hafa tsikelikely avy eo. Nisintona ny tolotra teo amin'ny tsena Shinoa tamin'ny taona 2010 ny Google noho ny fifandirana tamin'ny fitsipika henjana momba ny sivana tao Shina, saingy naneho fikasana hiverina indray eo amin'ny tsena. Tsy nanazava ny fanamarihan'i Binjie raha ampiharina amin'ny tolotra Google rehetra ny sivana.
Mitsipaka ny fandraràna Facebook amin'ny alina ny mpandrindra ao Bangladesh
Nitsipaka ny tolo-kevitra handràra ny Facebook eo anelanelan'ny ora misasakalina hatramin'ny 6 ora maraina ny Komity Mpandrindra ny Fifandraisandavitra ao Bangladesh, fepetra naroson'ny mpanao lalàna izay nilaza fa “mampihena ny fahafahan'ny tanora miasa” ny Facebook ka noho izany, tokony tsy azo idirana mandritra ny ora fatoriana. Nilaza kosa ny BTRC fa ny fanarahamason'ny ray aman-dreny sy ny endrim-piarovana sy ny fiainana manokana dia tokony ho fomba tsara kokoa hanatrarana izany tanjona izany. Navelan'ny tolo-kevitry ny BTRC ho an'ny governemanta ankehitriny ny fanapahan-kevitra farany.
Miatrika fandrahonana any amin'ny fitsarana sy antserasera ireo manam-pahaizana ao Emirà Arabo Mitambatra
Nosazian'ny fitsarana'ny Emirà Arabo Mitambatra 10 taona an-tranomazina ilay manam-pahaizana malaza Dr. Nasser Bin Ghaith noho ny “fandefasana vaovao diso” mikasika ireo mpitarika ao amin'ny ny Emira Arabo Mitambatra tao amin'ny Twitter “mba hanohintohina ny laza sy ny halehiben'ny Fanjakana.” Araka ny filazan'ny Amnesty International, nanao fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter i Bin Ghaith ary tsy nahazo fitsarana ara-drariny tamin'ny raharaha voalohany izay nanenjehana azy sy olona efatra hafa noho ny “fanevatevana ampahibemaso” ireo mpitarika ao amin'ny firenena tamin'ny fanehoan-kevitra anaty aterineto, izay fantatra amin'ny hoe raharaha “Emirà Arabo Mitambatra Dimy”. Mety hampiakatra ny didim-pitsarana any amin'ny fitsarana ambony izy ao anatin'ny 30 andro. Nitranga taorian'ny raharaha momba an'i Ahmed Mansoor, mpikambana iray hafa ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra Dimy, izay nosamborina herinandro mialoha ny raharaha Dr. Bin Ghaith.
Voatafika noho ny fiarovana “mpamadika mendrika ny ho faty” ireo mpanohana an'i Mansoor, izay nisioka ny fisamborana azy. Nanadihady ny fifandraisana teo amin'ireo mpanohana an'i Mansoor sy ireo izay nanafika azy ireo ny mpilatsaka an-tsitrapo tato amin'ny Global Voices ary nahita fa ny sasany tamin'ireo sioka tena nanan-kery mitsikera an'i Mansoor dia avy amin'ny kaonty hita fa an'ny mpiasan'ny governemanta na mpikambana ao aminy, izay nitarika ireo mpanohana hiringiriny ny governemanta hanafika an'i Mansoor tao amin'ny aterineto .
Fitsikilovana stingrays sarona tao Kanadà
Nahita ny fanadihadiana nataon'ny Canadian Broadcasting Corporation fa ireo IMSI mpitsikilo, fitaovana mitsikilo anaty finday ao anatin'ny faritra dia nampiasaina tao amin'ny faritra manodidina ny Havoanan'ny Parlemanta ao Ottawa Hill. Fantatra koa amin'ny hoe Stingrays, ny mpitsikilo IMSI dia miasa amin'ny alalan'ny fakana tahaka ny tilikambon'ny finday sy ny fanangonana tahiry misy ao anatin'ny faritra iray, matetika ny fitaovana rehetra ao anatin'ny tana atsasa-kilometatra. Na dia nanamafy aza ireo mpanao gazetin'ny CBC fa nampiasaina hatrany manodidina ny Parlemanta ny mpitsikilo IMSI, tsy afaka namaritra izay nampiasa izany kosa izy ireo.
Miady amin'ireo “vaovao faikany” ao amin'ny WhatsApp, Facebook ny developera (mpandrafitra) Indiana
Miasa hanangana tranonkala, check4spam.com ireo teknolojista Indiana roa, Bal Krishn Birla sy Shammas Oliyath, izay hanampy hamantarana ny vaovao faikany [mg] aely amin'ny fampiasana WhatsApp sy Facebook. Ny tetikasa dia natao hanakanana ny fielezan'ny vaovao diso sy mamitaka ary “hahatonga ny fiainana ho mora ho an'ny olon-tsotra sy mikorontana ho an'ny mpanao spam [mpandoto rindrina].”
Tahiry Lehibe: un aporte para la discusion de la politica publica en Colombia – Fundacion Karisma
Misorata Anarana Ao Amin'ny Netizen Report Amin'ny Alalan'ny Mailaka
Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Rezwan Islam, Kevin Rothrock, Nevin Thompson, Laura Vidal sy Sarah Myers West no niara nanoratra ity tatitra ity.